Deg deg:Liyuugii Canfarta oo laga Qaaday Hal magaalo oo kamida magaloyinkii lagu wareejiyay. | ogaden24
Deg deg:Liyuugii Canfarta oo laga Qaaday Hal magaalo oo kamida magaloyinkii lagu wareejiyay.
Jan 14, 2019 - Aragtiyood
War aanu kahelay ilo wareed lagu Kalsoon-yahay oo kusugan magalada Garba Ciise oo kamida deegaamada sida sharcidarada ah loogu wareejiyay mamulka Canfarta, in dhowaalana ay xiisadi kataagnayd ayaa waxaa saq-badhkii xalay Guure kaga baxay ciidankii Liyuuga ee mamulka Canfarta.
Kabixitaanka ay maleeshiyaadka mamulka Canfartu kabaxeen magalada Garba Ciise ayaa Ogaden24 loogu sheegay kutimid xiisad colaadeed oo shalay shacabka magaladu ay ku kiciyeen maleeshiyaadii Canfarta kaga sugnayd magalada.
Wada Hadal saacado Qaatay oo dhex maray shacabka iyo ciidanka milateriga ayay shacabku ka adkaysteen inaysan marnaba aqbalayn Joogitaanka ciidanka Canfarta oo xasuuq iyo dhibaato badan u Gaystay shacabka deegaanka degmada Garba Ciise, waxayna ciidanka milateriga oo kaduulaya dareenka shacabka ku amreen maleeshiyadii Canfarta inay magalada isaga baxaan saq badhkii xalay.